Tag: enyi mgbasa ozi | Martech Zone
Tag: egwu media
Nke a bụ nnukwu ihe ọmụma sitere na Salesforce na usoro ndị dị ugbu a na Ahịa Ọdịnaya, ihe onwunwe na ihe ịma aka metụtara - yana uru ya. Ọ bụ ụdị ihe ọchị na ha hapụrụ Infographics nke ụdị ọdịnaya, agbanyeghị! Mụtakwuo banyere usoro kacha mma ịre ahịa na sistemụ efu nke Salesforce, Otu esi Achọpụta Ihe Nlekọta Ọdịmma Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Na-aga nke Ọma. Ezie na echiche nke ika ịmepụta ọdịnaya iji nyere ndị ahịa aka
N'ihe banyere mgbasa ozi mgbasa ozi, mmekọrịta mmekọrịta nke na-ejide echiche ndị na-ege ntị bụ onye na-agbanwe egwuregwu. Marketinglọ ahịa ahịa mmekọrịta Buddy Media na-enye ụlọ nrụpụta nwere nchedo na nke nwere ike ịhapụrụ ndị ahịa azụmaahịa ịmepụta ma jikwaa ọdịnaya dị otú ahụ. Na njikọta nke Buddy Media na Radian6, salesforce.com ga-enwe igwe ojii ahịa ahịa kachasị ike nke ga-eme ka ndị ahịa gee ntị, tinye aka, nweta nghọta, bipụta, kpọsaa ma tụọ mmemme azụmaahịa mmekọrịta. Mee elu mee ala, anyi kwenyere